ARR BULSHADA | HOYGA WARARKA CAALAMKA | Page 20
Mareykanka” Duqeyntii aan ka fulinay Gaalkacyo Laguma Beegsan Shabaab
Gaalkacyo: Saraakiisha Mareykanka ee Afrika ayaa sheegay in duqeyntii ay ka fuliyeen duleedka magaalada Gaalkacyo 28-kii bishii September ay ku dileen maleeshiyo deegaanka, balse aanay Al-Shabaab aheyn. War ka soo baxay Taliska Mareykanka ee Afrika ayaa lagu sheegay in baaritaan horu dhac ah oo la sameeyay ay tahay in weerarkaas aan haba yaraatee lagu bartilmaameedsan Al-Shabaab. Baaritaano bilowday 4-tii bishii ...
Madaxweynaha Hirshabeelle oo la kulmay Maamulka G/Banaadir
MUDISHO: Madaxweynaha maamulka Hir-Shabeelle iyo xunaha Aqalka sare ee maamulkaas ayaa Maanta waxa soo gaaray Magaalada Muqdisho. Guddoomiyaha Gobolka Banaadir, Yuusuf Xuseen Jimacaale, ayaa sheegay inay aad ugu faraxsan yihiin ka maamul ahaan inay Muqdisho soo gaaraan Mudanayaal ka socda Aqalka Sare oo matalaya Gobollada Shabeellada dhexe iyo Hiiraan. Madaxweynaha maamulka Hir-Shabeelle, Cali C/laahi Cosoble ayaa isna sheegay inay ka ...
Daawo:Madaxweynaha Cusub Ee Mareykanka Donald Trump
Maraykanka: Donald Trump ayaa loo doortay in uu noqdo madaxweynaha cusub ee dalka Mareykanka kadib guul aan marnaba laa saadaalin oo uu ka gaaray doorashooyinkii dhacay, sidaasi waxaa qortay wakaaladda wararka ee AP iyo warbaahinaha kale ee Maraykanka. Trump oo ah musharaxa xisbiga Jamhuuriga ayaa ka adkaaday musharaxa xisbiga Dimoqraadiga Hillary Clinton oo dad badan ay saadaalinayeen inay guuleysan doonto. ...
Deg Deg: Donald Trump Madaxweynaha Cusub Ee Dalka Mareykanka.
Maraykanka: Natiijooyinka ka soo baxaya doorashooyinka dalka Mareykanka ayaa sheegaya in madaxtinimada wadankaasi uu ku guulaystay Hoggaamiyaha Xisbiga Jamhuuriga Donald Trump. Donald Trump waxa uu helay codad gaaraya 276 Cod , Halka Hillary Clinton ay heshay 218 cod. Oohin iyo murugo ayaa laga soo sheegayaa xarumaha ol olaha doorashada HILLARY CLINTON haweenayda uu qabo madaxweynihii hore ee Mareykanka una tartamaysa xisbiga ...
Donald Trump oo Qarka u saaran inuu noqdo Madaxweynaha Cusub Ee Dalka Mareykanka.
Maraykanka: Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya Natiijooyinka Hor u dhaca ah oo ku aadan Doorashada Madaxweyne ee dalka Mareykanka. Natiijooyinka hor dhaca ah ee ka soo baxaya doorashooyinka dalka Mareykanka ayaa sheegaya in Donald Trump uu qarka u saaranyahay inuu ku guulaystay xilka, maadaama Donald Trump uu heysto 245 Cod , Halka Hillary Clinton ay heysato 215 cod. Oohin iyo ...
Waa sidee saaka xaalada Magaalada Gaalkacyo?
Gaalkacyo: Magaalada Gaalkacyo ee xarunta Gobolka Mudug ayaa xaaladeeda saaka waxa ay tahay mid degan, kadib markii shalay Magaalada uu ka dhacay Dagaal geystay khasaare. Dagaalka shalay ka dhacay Magaalada Gaalkacyo ayaa waxa uu dhaxeeyay Ciidamo ka kala tirsan Maamullada Puntland iyo Galmudug, Inta la xaqiijiyay Dagaalkii shalay dhacay waxaa ku dhimatay 2 Qof halka sidoo kalena uu ku dhaawacmay ...
Wararka Doorashada Maraykanka
Maraykanka: Goobaha codbixinta ee gobollada qaarkood ayaa la soo xirayaa, waxaana soo baxaya natiijooyin hordhaca ah. Dadka codeynayay ayaa muujiyay sida ay u diidan yihiin hab dhaqanka musharrixiinta, waxaan su’aallaha la weydiiyay ka mid ahaa Ma ku dhibtaa sida uu Donadl ula dhaqmo haweenka? 71% waxay ku jawaabeen “Haa” 28% waxay ku jawaabeen “Maya” Sidoo kale waxaa la weydiiyay ma ...
Magaalada Jowhar oo saaka lagu dooranayo xubnaha Aqalka Sare
Jowhar: Doorashada Xildhibaanada Aqalka Sare ee maamulka Hirshabeelle oo shalay dib u dhaca ku yimid ayaa Maanta lagu wadaa in ay ka bilaabato magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeelaha Dhexe. Gudoomiyaha Baarlamaanka maamulka Hirshabeelle Sheekh Cusmaan Barre ayaa sheegay in maanta ay bilaaban doono Doorashada xildhibaanada Aqalka Sare ee ka imaanaya deegaanada maamulka Hirshabeelle. Inkabadan 20 musharax ayaa u taagan ...
Daawo: Waayihii ay soo Mareen Hillary Clinton iyo Donald Trump
Maraykanka: Dhmmaan Akhristayaasha warbaahinta Tabiye waxaan idiin soo baahinaynaa waayihii ay soo mareen musharrixiinta madaxtinnimada Maraykanka Hillary Clinton iyo Donald Trump. Halkaan ka Daawo….
Daawo: Trump oo wax aan badnayn kaga horeeya Hilary
Maraykanka Norm Ornstein ayaa BBC-da u sheegay in fursadda keli ah ee Hillary Clinton ay guusha ku hanan kartaa tahay in ay ku guulaysato gobollada Pennsylvania, Michigan iyo Winsconsin, waana dariiqa keli ah ee ay Aqalka Cad u mari karto. “Iyada jidkaas uun baa u furan, isagu se fursado badan buu haystaa” ayuu hadalka ku sii daray. Gobolka Washington ayaa ...